May 14, 2019 by arun Leave a Comment
How To Login To 192.168.1.254?: A Danho By Step Guide On How To Reset Password Uye Configuration Of Router
In danho iri nedanho gwaro iri sei Login kuna Admin Panel kuti 192.168.1.254, tichava Kutarira danho rimwe nerimwe uye nhungamiro.
Chii IP Address 192.168.1.254?
192.168.1.254 ane IP kero dzinoshandiswa routers mishoma yokutevedzera kuti vanyatsoona pachavo pamusoro pomumbure. 192.168.1.254 ndiyo imwe yekero dziri “private rezvebonde 16-ikakuruma misa kero nzvimbo” izvo chete inogona kushandiswa mukati private network.
Izvi nzvimbo IP kero ichi chinosanganisira 65,536 kero izvo zvakava zvinokwana diki musha network. yemanyorero, musha kana chiduku mabhizimisi network vanoshandisa chete subset izvi uye routers vakawanda kuchengetera kuwanda 192.168.1.0 – 192.168.1.255 pamumbure kwavo.
192.168.1.254 chinhu private IP kero chinouya mune zvakawanda chibvumirano kubva IANA(Internet Mugove Number Authority) unokudzwa. Kana iwe kutenga Modem kana router, anouya chete nezvezvaiitwa sei danda kuna router kuti kunokubatsira kuchinja yenyu router pazviruva. Private IP kero nechokwadi kuti hapana kupokana uye hapana munhu anogona danda kuti Network yako.
Private network vava dzakakurumbira zvikuru. Sezvo pa ichangobva nhau, IANA( Internet Mugove Number Authority) akachengetera dzakawanda chaizvo kero kutigumbura inotevera chizvarwa IPv6 kero. Nokuda kuchengeteka zvikonzero, corporates vakawanda vanosarudza private kero. In vorudzii network dzakadaro, pane nguva dzose anoganhurirwa Indaneti uye kazhinji Marshal unodiwa kuvhura padandemutande.
192.168.1.254 Username & Pasiwedhi
Ose router uye Modem ane default IP kero uye Login nezvezvaiitwa kuti kuwana pazviruva ari router. The IP Kero 192.168.1.254 inogona kushandiswa kuwana zviruva routers siyana kufanana TP-Link, ADSL routers, 2waya, 3ru routers, nezvimwewo.
Prerequisites Kuti kuwana default suo:
A hurongwa kwakabatana kumba WiFi
A maitiro apo unogona kuwana Browser
Step 1: Vhurai Browser pamusoro PC yako uye kupinda default IP kero 192.168.1.254 vari kutsvaka nomuzariro uye Login peji ichazarurwa kana router wako ane IP ichi chairo kero.
Step 2: Kupinda Username uye pasiwedhi kuti login kuti arun Panel. Kana usingazivi kana kukanganwa Username uye pasiwedhi, Zvinongoreva itangezve kuti router kuti default pazviruva kubudikidza wokudhinda-uye-mutsigirire Reset bhatani inenge 10 kuti 15 masekondi.
Step 3: Zvinokurudzirwa kuti kushandura SSID pamusoro router unova pomumbure zita zvinoonekwa nevamwe kwenyu Network Tab.
Edza kuramba nayo pfupi & nyore
Regai kuti shamisa zvikuru sezvo dzimwe nguva zvingaita zvinovapandukira
Usashandisa chero mashoko ako pachako sezvo zita router renyu.
How Kuchinja Default Username uye Password
Zvakakosha kuti achinje default zviruva router yako angadaro ari arun Panel uchishandisa Private IP Address 192.168.1.254 kuti vave nechokwadi kuti kubatana yako yakachengeteka.
Kutevera pazasi matanho kuti vachinje default Username uye pasiwedhi.
Chekutanga kuwana default resuo nokushandisa IP kero 192.168.1.254.
Zvadaro kupinda Username uye pasiwedhi uye kuona WiFi marongero (Nzira dzakasiyana zvakasiyana router / Modem), Kana uine zvakananga TV & WiFi zvino kushandisa musha nomumbure uye kusarudza Wireless router nezvechisarudzo. Kana akakumbira mhando mu zano Code (riri kudivi resuo). Unogona kuchinja zita uye Save
Kuchinja default pasiwedhi, unofanira kusarudza WPA / PSK encryption Kurongwa apo grayed kunze pasiwedhi zvichabviswa pachena. Zvino kushandura pasiwedhi uye achaponesa.
Tips kushandura Username wako uye pasiwedhi:
password anofanira kuva mubatanidzwa bumbiro, Numeric uye vatambi
password anofanira kuva 8-16 vatambi refu uye nyore kuyeuka
Username zvinofanira kuva nyore
Unofanira ona Username uye pasiwedhi nokuda IP kero 192.168.1.254 nokuti ramangwana panotaurwa kana iwe akakanganwa zvimwe.
Sei haigoni I batanidza kuti router yangu: http:://192.168.1.254
Vanhu Most havagoni batanidza kuti default Login Panel nokuti vashoma achitaipa kukanganisa. Unofanira kuva nechokwadi chokuti hapana semicolon asi muura pashure http: kana https. Kero zvechokwadi ndiyo 192.168.1.254
Ko kana ini akakanganwa IP kugadzirisa Username uye pasiwedhi?
Pose iwe kuwana router itsva kana Modem, imi makakohwa default Kurongwa kuti encrypted pamusoro bhokisi kana sezvataurwa pamusoro Chinyorwa. Unogonawo kutaura ISP yako (Internet Service Provider) kunotora default Kurongwa.
Matanho kuti Reset munhu router – Sei Reset Router Your
Kudzima router yako.
Press-uye-mutsigirire Reset bhatani inenge 10-15 masekondi kushandisa wakananga chinhu akadai tsono uye ipapo batidza router.
Kusunungura bhatani kurega router reboot
Zvino batanidza kuti router nekushandisa WiFi kubatana kana nomumbure wire uye Login kushandisa default Kurongwa.
yambiro: Resetting munhu router achaita zvinomuomera kuikanganwa zvose rapfuura akaponesa mashoko uye pazviruva. It achatsausa router wako fekitari default.
The 192.168.1.254 IP kero iri private IP kero iro rinoshandiswa routers zhinji kuti vazivikanwe pamusoro pomumbure. Unofanira kuchengeta ichi IP kero mupfungwa kana uchida kushandura zviruva router wako nokuti kuchaita kuti kuwana arun Panel.